sawehlor: ကြောက်စရာကောင်းသော Virus . ပါဝင်သော အင်တာနက် သီချင်းများစုစည်းမှု DVD/VCD
ကြောက်စရာကောင်းသော Virus . ပါဝင်သော အင်တာနက် သီချင်းများစုစည်းမှု DVD/VCD
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ကွန်ပျူတာ ဟိုတလောက Virus ကိုက်သွားပါတယ်..။ ဘာကြောင့်မှန်း မသိပါဘူး. Windows XP မတက်တော့ပဲ restart ပဲပြန်ဖြစ်ဖြစ်နေပါတယ်..။ နောက်တော့ သူက အင်တာနက်သီချင်းများစုစည်းမှု အခွေကို ကွန်ပျူတာမှာ နားထောင်လိုက်တယ်လို့ ပြောပါတယ်..။ အဲဒါနဲ့ ..သူ့ကွန်ပျူတာကို စစ်ကြည့်တော့ Hard disk drive (C:) ထဲက system ဖိုင်တွေ ပျက်နေပါပြီ..။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော့် ကွန်ပျူတာမှာ အဲဒီ အခွေကို my computer မှာ double click မနှိပ်ပဲ XYplorer နဲ့ hidden file တွေရှာကြည့်တော့ ..
VCD_play.exe ဖိုင်တွေကို တွေ့ရပါတယ်။
ကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲကို အဲဒီ အချပ် ထည့်လိုက်တာနဲ့ autorun ပြီးတော့ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာ Drive C: ထဲက
NTDETECT.COM ဖိုင်တွေရယ် C:\_windows ထဲက
အစရှိတဲ့ ဖိုင်တွေကို ..လုံးဝ DELETE လုပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်..။
အဲဒီတော့ windows ကို ပြန်တင်ရင်တင်၊ မတင်ရင် Repair လုပ်၊ မလုပ်ချင်ရင် ..Virus က ဖျက်လိုက်တဲ့ ဖိုင်တွေကို ကော်ပီကူးလိုက်...။ အလုပ်တော့ တော်တော်ရှုပ်ပါတယ်..။ ကြားထဲ့က အခန့်မသင့်ရင် Drive တွေကို Format ချမိပြီး DATA တွေပါ ပျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်..။
အဲဒီတော့ အဲဒီ သီချင်းခွေကို လုံးဝ ကွန်ပျူတာနဲ့ ဖွင့်မကြည့်ကြပါနဲ့..။ AUTORUN ကို ပိတ်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေမှာလည်း My Computer ထဲကနေ အဲဒီ သီချင်းခွေထည့်ထားတဲ့ Drive ကို Double Click နှိပ်မိရင် ...ကွန်ပျူတာထဲက system file တွေ အဖျက်ခံရနိုင်ပါတယ်..။ တစ်ခုထူးခြားတာက သူ့ကို AntiVirus Software တော်တော်များများက သတ်ပေးလို့မရပါဘူး..။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ DVD, CD ထဲက System File တွေ ဖြစ်နေလို့ပါ ..။ အဲဒါက ပိုအန္တရာယ်ကြီးပါတယ်..။
အဲဒီတော့ အဲဒီလိုမဖြစ်အောင် CD/DVD ထဲက System File, Hidden File တွေကိုမြင်ရအောင် အလွယ်တကူ install လုပ်လို့ရတဲ့
XYPLORER ကို ထည့်ထားကြပါ..။ အဲဒီ FILE MANAGER SOFTWARE လေးက windows explorer နဲ့ ပုံစံအတူတူပါပဲ ..။ ဒါပေမယ့် သူက windows explorer မှာ မမြင်ရတဲ့ hidden/ Super Hidden လုပ်ထားတဲ့ဖိုင်တွေအားလုံးနီးပါးကို မြင်ရပြီး hidden ကိုလည်း ဖြုတ်လို့ရပါတယ်..။ သူ့ရဲ့အသုံးဝင်ပုံက ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်သမျှ Drive တွေအကုန်လုံးရဲ့ Hidden File တွေကို မြင်ရပါတယ်..။ ပြီးတော့ USB Stick, Memory Card, Hard Disk တွေထဲက ဖိုင်တွေကို ဖျက်လို့ ကူးလို့ရပါတယ်.။
အင်တာနက်မှာ download လုပ်လို့ရတဲ့ ဒီ software လေးက ရက်သုံးဆယ်ပဲသုံးလို့ရပါတယ်..။ ရက်သုံးဆယ်ပြည့်ရင် Uninstall ပြန်လုပ်ပြီး Install ပြန်လုပ်ရင် ရက်သုံးဆယ် ပြန်ရပါတယ်..။ အောက်မှာ ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပြီးသုံးကြည့်ကြပါ..။
အခု နောက်ဆုံးအင်တာနက်ဂျာနယ်မှာပါလာတဲ့သတင်းအရ အင်တာနက်သီချင်းများစုစည်းမှု (၄) အခွေမှာပါ အဲဒီလို Virus ပါဝင်ကြောင်း သိရပါတယ်..။
DVD, CD ခိုးကူးတဲ့လူတွေက .. သူတို့ကျတော့ သီချင်းတွေကို လက်ရွေးစင်ထုတ် ခိုးကူးပြီး ...တခြားသူတွေ၊ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုတဲ့သူတွေက သူတို့ခိုးကူးထားတဲ့သီချင်းတွေကို .. စိတ်ကြိုက်မရွေးချယ်နိုင်၊ မသိမ်းဆည်းနိုင်၊ ပြန်မကူးနိုင်အောင်..
အောက်တန်းကျစွာနဲ့ ဖန်တီးထားတာပါ..။ သူတို့က Windows System မပါတဲ့ DVD အခွေပွားစက် Duplicator တွေနဲ့သုံးတော့ အဲဒီ Virus ထည့်ထားတဲ့ DVD, CD တွေကို ရာထောင်ချီပြီးပွားနိုင်ပါတယ်..။ သူတို့စက်တွေ မပျက်ပါဘူး ..။ သူတို့ပဲခိုးကူးစားမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ..။
Posted by saw ehlor at 23:43